ဝိမုတ္တိသုခ (The Bliss Of Emancipation): February 2009
- By Sayardaw U Jotika
Whether meditation, as I understand it, is not creating something (calm, concentration or insight, or what not). Rather it is seeing clearly whatever is happening in the moment inavery simple way. Aiming at, or creating calmness, or insight is trying to start from where we should be. So we always fall back to where we are because we did not start from where we are. Another way of saying it is: Meditation is complete internal communication, or life (problems) understood in depth is meditation.
So there should be no difference between untangling the content of one’s ‘stuff’, working with problems (neurotic, or what not), and meditation. It is all part of the same process.
For me, doing counselling and giving guidance in meditation are not much different. Soaperson who does not understand people but hasalot of book knowledge is notameditation teacher (or counsellor) but isascholar. A person who teaches and guides people according toaformula should not beameditation teacher!
Most Westerners needalot of help just untangling the content of their stuff. For this,aworldly teacher can be very helpful… I understood this pointalong time ago, and I am getting deeper into this matter. Even when I was in the USA my way of working with people was first to understand their life, their stuff, their problems, and see where they are stuck. Helping them see their problems clearly. The whole point of meditation is just untangling — to untangle internal and external tangles.
So there can be no cut and dried formula for everybody. People are unique. So there should be flexibility. The Buddha himself gave different instructions for different people.
My understanding is thatameditation teacher must be very sensitive. He (or she) must understand himself very deeply. He must be aware of his own tangles; be very creative in dealing with people; understand every person inadeeper way; be gentle and patient in guiding; not be pushing or demanding to make progress which can causeafeeling of inadequacy and unhappiness. He must understand where his student is. You know, we must start from where we are, not from where we should be. So,ateacher must understand whereastudent is and give him/her guidance so that the student can start from where he/she is.
Meditation, as it’s been taught to and practised by many people, has its limits. That’s because they don’t understand it properly and they are trying to do it as if it is something apart from their life.
Real mindfulness meditation is all-inclusive. No part of our mental and physical life should be left out of our mindfulness. Every aspect of our life should be well understood.
Real practice is natural, moving, living, limitless, should be practised everywhere, every time. A specialised and fragmented approach is unacceptable for me. I am beginning to feel thataspecialised, standardised approach is harmful (I have never been able to force, restrict myself to do that). For me meditation is not something special.
(The above texts are copied and quoted from the dhamma book, "Snow In The Summer" By Venerable Sayardaw U Jotika.)
(အောက်တွင်ဖော်ပြမည့်ဆောင်းပါးပါ အကြောင်းအရာများသည် ဓမ္မမိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့် ဗဟုသုတအလို့ ငှာ တရားဆွေးနွေးရင်း သိရှိခဲ့သောအကြောင်းအရာများကို တဆင့်ပြန်လည်ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများသည် ဗုဒ္ဓစာပေကျမ်းဂန်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိချင်မှရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းကို ကြိုတင်အသိပေးလိုပါသည်။ သို့ သော် ဖတ်ရှုသူများအတွက်နှင့် စမ်းကြည့်ချင်သူများအတွက် အကျိုးယုတ်စရာ မဖြစ်နိုင်ဟု ယုံကြည်ယူဆမိပါသဖြင့် ရေးသားဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာအများစုတို့ သည် စိပ်ပုတီးစိတ်ခြင်းကို ဘာသာရေးကျင့်စဉ်တစ်ခု အနေဖြင့်လက်ခံကျင့်သုံးလာခဲ့ကြသည်မှာ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ တချို့ ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်း စိပ်ပုတီးကို ထေရ၀ါဒဘုရားဟောနှင့် မညီဟု ယုံကြည်ယူဆလျက် လက်မခံခဲ့ကြပါ။ တချို့ ကတော့ လောကီစီးပွားနှင့် ဂမ္ဘီရကျင့်စဉ်များနှင့် စပ်ဆက်ပြီး လက်ခံအသုံးပြုနေကြသည်များလည်းရှိနေပါသည်။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏အဆုံးအမ စစ်စစ်ကိုမှ လက်ခံကျင့်သုံးချင်ခဲ့သော ကျွန်တော်သည်လည်း တစ်ချိန်တုန်းက စိပ်ပုတီးကို ရှောင်ဖယ်ဖယ်နေမိခဲ့ဖူးပါသည်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဗုဒ္ဓက ကောင်းမှုမှန်သမျှကိုလုပ်ပါလို့ ဆုံးမခဲ့တာကိုသတိထားမိပြီး၊ စိပ်ပုတီးစိတ်ခြင်းဟာ ဘာမှမလုပ်ဘဲနေ နေတာထက်စာရင်တော့ ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေတာဘဲလို့ တွေးမိပြီး အားတဲ့အချိန်လေးတွေမှာ တခြားထွေထွေထူးထူးမလုပ်ဖြစ်တဲ့ အချိန်တွေမှာ စိပ်ပုတီးနှင့် ဂုဏ်တော်ပွားတာမျိုးကို ပြန်လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
တစ်ရက်တော့ ကျွန်တော်နှင့် အလွန်ရင်းနှီးတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေ အစ်ကိုတစ်ဦးနှင့် စကားစပ်မိရင်း စိပ်ပုတီးအကြောင်းဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော် - အစ်ကို၊ လူတော်တော်များများ ပုတီးစိတ်ကြတယ်နော်၊ ပုတီးစိတ်တာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်တော့ငြိမ်တာဘဲ။
မိတ်ဆွေ - အင်း....ဘယ်လိုပြောရမလဲညီလေးရ။ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတော့ စိတ်ငြိမ်မှုရတာဟုတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်က ပုတီးစိတ်ရင် စိတ်ငြိမ်ဘို့ ဆိုတာ မလွယ်ဘူး။
ကျွန်တော် - အစ်ကို့ စကားက တစ်မျိုးကြီးပါလား။ တော်တော်များများကကျတော့ စိတ်ငြိမ်အောင်ဆိုပြီး ပုတီးကိုင်ကြတာဘဲ။
မိတ်ဆွေ - သူတို့ တွေ တကယ်သတိမထားမိလို့ ပါ။ ပုတီးစိတ်တာ သူ့ သဘာဝအတိုင်းဆို စိတ်ကို ငြိမ်အောင်ထားလို့ မရဘူး။
ကျွန်တော် - ရှင်းပြပါအုံး အစ်ကိုရ။ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
မိတ်ဆွေ - ပုတီးစိတ်တဲ့သူဟာ တစ်ချိန်ထဲမှာ အလုပ် (၃) လုပ်ကို တပြိုင်တည်းလုပ်ရတယ်။ လက်ကလည်း လှုပ်ရတယ်၊ ပါးစပ်ကလည်း ရွတ်ရတယ်၊ စိတ်ထဲကလည်း ကိုယ်ရွတ်တဲ့ ဂါထာ (ဒါမှမဟုတ်) ဘုရားစာကို အာရုံပြုနေရတယ်။ စိတ်ရဲ့ သဘောက ညီလေးလည်း သိတဲ့အတိုင်း တစ်ချိန်မှာ တစ်ခုတည်းဘဲသိလို့ ရတယ်။ ဒီတော့ ပုတီးစိတ်နေတဲ့သူဟာ ဘယ်လို စိတ်ကို ငြိမ်အောင်လုပ်လို့ ရမလဲ။ သူ့ မှာ အလုပ်တွေအများကြီးကို တစ်ချိန်မှာ တစ်ပြိုင်တည်းလုပ်နေရတာ။
ကျွန်တော် - ဒါဆို အစ်ကိုဆိုလိုချင်တာက ပုတီးသမားဟာ စိတ်ကို အပေါ်ယံငြိမ်အောင်လောက်ဘဲ လုပ်လို့ ရမယ်။ တရားအားထုတ်တဲ့ ယောဂီလို ဧကဂ္ဂတာ ကျတဲ့အဆင့်ထိ လုပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ဆိုလိုတာလား။
မိတ်ဆွေ - ဒီလိုလည်း စကားကုန်ပြောလို့ မရပြန်ဘူးညီလေးရ။ တချို့ လူတွေ အစ်ကို တွေ့ ဖူးတာရှိတယ်။ ပုတီးစိတ်ရင်း စိတ်က သမာဓိတကယ်ရတဲ့အချိန်မှာ ခုနကပြောခဲ့တဲ့ အလုပ်တွေထဲက တစ်ခုဘဲကျန်ခဲ့ပြီး ကျန်တာတွေက သူ့ အလိုလို ရပ်သွားတတ်ကြတာတွေကြုံဖူးတယ်။ ဥပမာကွာ- အရဟံဂုဏ်တော်ပွားနေတဲ့သူဆိုပါတော့။ သူတကယ် သမာဓိအားကောင်းသွားပြီဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိတာတွေက သူစိတ်နေတဲ့ပုတီးစေ့ကို ဆက်မစိတ်နိုင်တော့ဘဲရပ်သွားမယ်၊ ပြီးတော့ပါးစပ်ကရွတ်နေတာလည်းဘဲရပ်သွားမယ်၊ သူ့ စိတ်က အရဟံဂုဏ်တော် အပေါ်မှာဘဲကြည်ညိုတဲ့စိတ် တစ်ခုတည်း ဖြစ်နေတော့မယ်။ အဲဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ နောက်တစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တာက ပါးစပ်ကရွတ်နေတာနှင့် စိတ်ထဲကဂုဏ်တော်အာရုံပြုနေတာရပ်သွားပြီး လက်ချောင်းလေးတွေက ပုတီးလုံးကိုစွဲချနေတဲ့ဆီမှာဘဲ သူ့ စိတ်ကရောက်သွားတာမျိုးလည်းဘဲ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ စိတ်က အာရုံတစ်ခုကိုဘဲ ယူလိုက်တော့တဲ့သဘောပေါ့ကွာ။
ကျွန်တော် - သြော်..ပုတီးစိတ်ရင်း ဒါမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်သလားဗျ။
မိတ်ဆွေ - ဖြစ်တတ်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ချို့ တွေပြောတာကြားဖူးလိမ့်မယ်။ အိပ်လဲမငိုက် စိတ်လဲမလွင့်ဘဲ ပုတီးစိတ်ရင်း ပုတီးလက်ကလွတ်ကျသွားတယ်တို့ ၊ ရွတ်နေတဲ့စာသားပျောက်သွားလို့ ဘယ်ကစရွတ်ရမှန်းမသိဖြစ်သွားတယ်တို့ ဆိုတာမျိုးပေါ့။ တကယ်ကအဲဒီလို အတွေ့ အကြုံမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ ဓမ္မဗဟုသုတလေးရှိရင် သူတို့ အတွက်ကောင်းမယ်။
ကျွန်တော် - ဒါဆို အဲဒီလိုမျိုးအနေအထားဖြစ်ရင် ဘာဆက်လုပ်သင့်သလဲအစ်ကို။
မိတ်ဆွေ - အဲဒီအခြေအနေကတော့ ပုတီးစိတ်တဲ့သူအနေနဲ့ သမာဓိအတော်အသင့်ထူထောင်မိပြီဆိုတဲ့သဘောကို ပြောတာဘဲ။ အဲဒီနောက်ပိုင်းကတော့ သူဘာဆက်လုပ်ချင်သလဲဆိုတာ ပေါ်မှာမူတည်တယ်။ လောကီဘက်ဆက်လိုက်မလား။ လောကုတ္တရာဘက်လိုက်မလား။ ဒါကတော့ သူ့ အားသန်ရာပေါ့။
ကျွန်တော် - လောကုတ္တရာဘက်ကျတော့ အဲဒီနေရာကနေ ဘယ်လို ဆက်လိုက်ရလဲအစ်ကို။
မိတ်ဆွေ - ဒါကတော့ညီလေးရာ။ အစ်ကိုတို့ တရားအားထုတ်တဲ့ ယောဂီတွေ ၀င်လေထွက်လေတို့ ၊ ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်တို့ မှတ်လို့သမာဓိအတော်လေးထူထောင်ပြီးချိန် ၀ိပဿနာဘက်ကူးသလိုဘဲပေါ့။ ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ထင်ရှားတဲ့အာရုံတွေကို ဆက်ပြီးမှတ်ရုံရှိတော့တာပေါ့။
ကျွန်တော် - အား...သဘောပေါက်ပြီ အစ်ကို။ ဒီလိုဆိုတော့လည်း စိပ်ပုတီးကလည်း ဘယ်ဆိုးလို့ လဲ။ အသုံးချတတ်ရင် ခရီးရောက်တာဘဲ။
မိတ်ဆွေ - ဟုတ်တာပေါ့ညီလေးရာ။ အမှန်က စိပ်ပုတီးကလည်းဘဲ ၀ိပဿနာတရားအားထုတ်မယ့် သမာဓိထူတောင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် Tool တစ်ခုပါဘဲ။ သုံးတတ်ရင်ပေါ့။
(ပုတီးစိတ်နည်းတင်ပေးပါလို့တောင်းဆိုဖူးတဲ့ ကိုဒေါင်းမင်းအတွက် ဒီပို့ စ်လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုဒေါင်းမင်းလိုချင်တဲ့ပုံစံနှင့် အံဝင် မ၀င်တော့ မကျိန်းသေပါဘူးဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း သိထားတာလေးတွေထဲက ကြိုးစားပြီးရေးတင်ပေးလိုက်တာပါ။ )
Posted by The Bliss Of Emancipation at 5:49 AM0comments Links to this post
Labels: Dhamma Articles, Rosery Beans, စိတ်ကူးပုံရိပ် စာစုများ
ကိုယ်ကျိုးသာ ကျင့်သူ၊ သူတပါး အကျိုးသာ ကျင့်သူ၊ သူကျိုး ကိုယ်ကျိုးနှစ်မျိုးလုံးကျင့်သူ၊ နှစ်မျိုးလုံးမကျင့်သူဟု ပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးရှိရာ ကိုယ်ကျိုးသာကျင့်သူမှာ ဥစ္စာစသည် ပြည့်စုံချင်ပြည့်စုံမည် ဖြစ်သော်လည်း စိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်မှုကား အပြည့်အ၀ရလိမ့်မည်မဟုတ်။ သူကျိုးသာကျင့်သူ၌ မိမိအကျိုးအတွက် သောကဖြစ်ရ တတ်သေး၏။ နှစ်မျိုးလုံးကျင့်သူမှာ သောကကင်းဝေး အေးချမ်းသသူတည်း။ နှစ်မျိုးလုံးမကျင့်သူမှာ လောက၌ ဆုံးရှုံးသောသူတစ်ယောက်ဖြစ်၏။ အများအကျိုးအစဉ်ဆောင်သူမှာ အများ၏ချစ်ခင်လေးစား အရေးထားခြင်း ခံရသည့်အပြင် မိမိ၏ထိုကောင်းမှုများကို မြင်ရတွေ့ ရတိုင်း စိတ်ကြည်နှုး၍ ရွှင်မြူးချမ်းသာကာ ပျော်လျက်ရှိ၏။ ဘေးကင်း ရန်ကင်း စိတ်ချမ်းသာခြင်းဖြင့် အစဉ်အမြတ်ထွက်လျက်ရှိ၏။ တရပ်တရွာ တမြို့ လုံး ထိုလူမျိုးတွေများ လျင် ထိုအရပ်မှာ အစဉ်သာယာ အေးချမ်းရွှင်လန်း ပျော်မွေ့ ဖွယ်ရာသာဖြစ်၏။ ထိုအရပ်မျိုး၌ လူ-လူချင်း မေတ္တာဖြင့် ဖွဲ့ လျက်ရှိရာ ကွဲပြားမှုမရှိ၊ တသားတည်း ညီညွတ်စည်းလုံးလျက်သာ ရှိမည်ဖြစ်၍ အန၀ဇ္ဇကမ္မမှာ ရပ်ရွာစည်ပင်သာယာရေး၊ လူလူချင်း စည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ ကုသိုလ်အမြဲဖြစ်ရေးအတွက် လေးလေးနက်နက် လိုက်နာသင့်သော ကုသိုလ်မှု ဖြစ်ပေသည်။
(သပြေကန်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ပရိတ်ကြီးနိဿယသစ် စာမျက်နှာ ၁၄၀-၁၄၁ မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 7:37 AM 1 comments Links to this post
Labels: Dhamma Notes, Thapyaekan Sayardaw
A famous spiritual teacher came to the front door of the King's palace. None of the guards tried to stop him as he entered and made his way to where the King himself was sitting on his throne.
"What do you want?" asked the King, immediately recognizing the visitor.
"I would likeaplace to sleep in this inn," replied the teacher.
"But this is not an inn," said the King, "It is my palace."
"May I ask who owned this palace before you?"
"My grandfather. He too is dead."
"And this place where people live forashort time and then move on - did I hear you say that it is NOT an inn?"
Posted by The Bliss Of Emancipation at 4:17 AM0comments Links to this post
မီးဘေးကင်းစေရန် ရည်ရွယ်၍ ဟောကြားတော်မူသော
(ဤတရားတော်အား ကိုဒေါင်းမင်းထံမှတဆင့်ရရှိ၍ ပြန်လည်လှူဒါန်းမျှဝေပါသည် ။ တရားတော်ကို မျှဝေပေးသော ကိုဒေါင်းမင်းအား ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ် ခင်ဗျား။ )
(တခြားသော ဆရာတော်ဘုရားများ၏ ပရိတ်တရားတော်များကိုလည်း ဤဘလော့ဂ်၏ http://vimuttisukha.blogspot.com/2008/08/collection-of-paritta.html
နေရာတွင် သွားရောက် နာယူပူဇော်နိုင်ပါသည် ခင်ဗျား။ )
Posted by The Bliss Of Emancipation at 1:56 AM0comments Links to this post
Labels: Dhamma Talks (Audio), U Uttamasara
ပဉ္စဂုင်္တ္တရ(၃၃)၌ သီဟစစ်သူကြီးက “ဒါန၏ မျက်မှောက်ဘ၀၌ပင် ရမည့်ကိုယ်တွေ့ အကျိုးကို ညွှန်ပြနိုင်ပါသလား” ဟုလျှောက်ရာ ညွှန်ပြနိုင်ကြောင်း မိန့် တော်မူ၍ အကျိုးငါးပါး ဟောကြားတော်မူခဲ့သည်။ ထိုအကျိုးများကား-
(၁) လူအများချစ်မြတ်နိုးခံရခြင်း။ တိရစ္ဆာန်များပင် ပေးသူကိုချစ်ခင်ကြ၏။ ဤအကျိုးမှာ အကျိုးလိုလားမေတ္တာထားခြင်းဖြင့် ရအပ်သောအကျိုးပင်။
(၂) သူတော်ကောင်းများ အလှူရှင်ထံ ချဉ်းကပ်လာခြင်း။ မလှူသူ့ ထံ မည်သူမျှမလာလိုကြ၊ သူတော်ကောင်းများ လာခြင်းလာလျှင် အလှူရှင်ထံသာ ရောက်လာမြဲတည်း။ သူတော်ကောင်းများ ရောက်လာခြင်းဖြင့် ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်း၊ အဖိုးတန်တရားလက်ဆောင်များ ရခြင်းဖြင့် အကျိုးများလှပေသည်။
(၃) ကောင်းသတင်းကျော်ဇောခြင်း။ သူများကောင်းစားအောင် အကျိုးဆောင်သူမှာ မိမိက ဂုဏ်လုပ်ဖွယ် ပကာသနပြုဖွယ်မလိုပါ။ အများကပင် ဖော်ထုတ်ဂုဏ်တင်လျက် ရှိကြ၍ အစဉ်သတင်းမွှေးလျက် ရှိရသည်။
(၄) မည်သည့်ပရိသတ်ထဲသို့ မဆို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ၀င်ရောက်နိုင်ခြင်း။ မကောင်းမှုပြုထားသူမှာ မိမိအပြစ်တွေး၍ ရွံ့ တတ်လန့် တတ်သော်လည်း သူတပါးအချီးမွမ်း အချစ်အခင် ခံနေရသော ကောင်းမှုရှင်မှာ တွေး၍ရွံ့ စရာ လန့် စရာ မမြင်သဖြင့် အစဉ်ရဲဝံ့လျက် ရှိလေသည်။
(၅) သေသော် နတ်ပြည်ရောက်ရခြင်းတို့ တည်း။
“အများချစ်အပ်၊ သူမြတ်တို့ ချဉ်း၊ ကောင်းသတင်းကြွယ်၊ ပွဲလယ်ဝင်ရဲ၊ ခန္ဓာစဲသော်၊ ရောက်မြဲနတ်ထံ၊ ဤငါးတန်၊ ရရန်လှူကျိုးတွေ။”
ဒါနသံသရာ ရှည်သလော။ ။ အချို့ ကဒါနကို သံသရာရှည်စေတတ်သော တရားဟု ကြောက်လန့် ဖွယ် အဖြစ်ဆိုကြ၏။ သံသရာဝဋ်မှ ကျွတ်လွတ်ရန် လိုလားကြသော အလောင်းတော်များ ဒါနကို လိုလိုလားလား ပြုခဲ့ကြသည်မှာ သံသရာမှလွတ်ကြောင်း ဖြစ်သောကြောင့်သာဖြစ်သည်။ တဏှာသည်သာ သံသရာရှည်ကြောင်းဖြစ်၏။ နည်းမှန်လမ်းမှန်ပြုသော ဒါနမှာ တဏှာကို ပယ်နိုင်ကြောင်းဖြစ်၏။ အလောင်းတော်များမှာ ခုဘ၀ နောင်ဘ၀ သာယာရေးအတွက် မိမိဖို့ ရာ ဘာတစ်ခုမှ မတောင့်တကြ။ သတ္တ၀ါများ ကောင်းစားစေလို ချမ်းသာစေလိုသော စေတနာသာ ထား၍ ပေးကမ်းကြ၏။ ဤဒါနမျိုးကို ပါရမီမြောက်ဒါနဟုဆို၏။ အကယ်၍ တောင့်တလိုလျင်လည်း သံသရာဝဋ်မှ လွတ်ရေးသာ တောင့်တသင့်၏။ သံသရာဝဋ်မှ လွတ်ရန် တောင့်တခြင်းမှာ တဏှာမဖြစ်ပေ။ ထိုဒါနမျိုးကို ၀ိဝဋ္ဋနိဿိတ ဒါနဆို၏။ တဏှာဆန္ဒမကင်းသော ၀ဋ္ဋနိဿိတ ဒါနမျိုးမှာ သံသရာလည်ကြောင်းဖြစ်သော်လည်း တဏှာမပါသော ၀ိဝဋ္ဋနိဿိတမှာ သံသရာမှ မြန်စွာလွတ်ကြောင်းပင်ဖြစ်သည်။
မကြောက်ထိုက်။ ။ ဒါနရှင်မှာ ပေးလှူခိုက် မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ၊ မုဒိတာများ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိရာ အလှူခံတို့ခံယူသုံးဆောင်သည်ကို အားရကြည်နူး ရွှင်မြူးဝမ်းသာ စိတ်ချမ်းသာလျက် ရှိနေ၏။ နောင်အခါ တွေးမိတိုင်းလည်း ၀မ်းသာကြည်နူး ရွှင်မြူးလျက်ရှိ၏။ ဤသည်တို့ မှာ လက်တွေ့ ခံစားရသော ဒါနအကျိုးတရားများပင်။ သူတစ်ပါးအပေါ် မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ၊ မုဒိတာပွားလျက်ရှိသောကြောင့်လည်း မာန၊ ဒေါသ၊ လောဘ၊ ဣဿာ၊ မစ္ဆရိယစသော တရားဆိုးများ ကင်းရှင်းလျက်ရှိရာ ထိုတရားများ ပါးကြောင်းဖြစ်သော ဒါနကို မလိုက်နာ၊ မပြုကျင့်ထိုက်ပဲ ရှိပါမည်လော။ ဒါနကို ကြောက်သူမှာ ဥသျှစ်သီးကြွေကျသည်ကို မြေပြိုပြီအထင်ဖြင့် ကြောက်ပြေးသော ယုန်မိုက်ပမာ မကြောက်ထိုက်သည်ကို ကြောက်ခြင်းသာ။
ဆုံးရှုံးမှု။ ။ အချို့ မယုံ၍ မိမိမူကား သုံးစား၏။ ထိုသူမျိုးကား ဘ၀နောင်ရေးအတွက် ရှူံးသူဖြစ်သော်လည်း ဤဘ၀မရှူံး၍ တော်သေး၏။ တချို့ မူ လှူလည်း မလှူ၊ စားလည်း မစားရက်။ ထိုသူမျိုးမှာ သာ၍ ဆုံးရှူံးသောသူတည်း။ ထိုသူမျိုးကို ပန်းထိမ်သမားတို့ ၏ ဖားဖိုကဲ့သို့အသက်ရှူလျက် အသက်မရှင်သူ (သေသူ) ဟု ပညာရှိတို့ဆိုကြသည်။
(သပြေကန်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ပရိတ်ကြီးနိဿယသစ် စာမျက်နှာ ၁၂၈-၁၃၀ မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။)
မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော် ၀န၀ါသီ အရှင်ဉေယျဓမ္မသာမိထေရ်
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:59 AM0comments Links to this post
Labels: Dhamma Talks (Audio), Maha Bodhimyaing Sayardaw, ဗောဇ္ဈင်(၇)ပါး
Posted by The Bliss Of Emancipation at 8:07 AM0comments Links to this post
Labels: Dhamma Talks (Audio), Moe Goke Sayardawgyi
သုခ (၄) မျိုး
(၁) အတ္ထိသုခ - ငါ့မှာရှိသည်ဟု တွေးမိသောအခါဖြစ်သော ချမ်းသာ။ အလုပ်ကြိုးစားခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းတွေရလာ သောအခါ ငါ့မှာပစ္စည်းရှိသည်ဟု တွေးမိတိုင်းဖြစ်သော စိတ်ချမ်းသာမှု ၀မ်းသာအားရမှုတည်း။
(၂) ဘောဂသုခ - သုံးဆောင်ခံစားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော ချမ်းသာ။ အလုပ်ကြိုးစားခြင်းဖြင့် ရလာသော ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကို သုံးဆောင်ခံစားရသောအခါ ဖြစ်သောချမ်းသာမှု ၀မ်းမြောက်မှုတည်း။
(၃) အာနဏျသုခ - ကြွေးမရှိသောကြောင့် ဖြစ်သော ချမ်းသာ။ ကြွေးတင်နေသောသူမှာ ထိုကြွေးအတွက် အမြဲပူပန်ရခြင်း၊ ကြွေးမဆပ်နိုင်သောအခါ စိတ်ဆင်းရဲရခြင်း၊ ကြွေးရှင်တို့ အကြိမ်းအမောင်းခံရခြင်း၊ တရားစွဲခံရခြင်းစသည်ဖြင့် ဒုက္ခများလှ၏။ အလုပ်ကြိုးစား၍ ပစ္စည်းပြည့်စုံလာသူမှာ ထိုကြွေးဒုက္ခမရှိ၍ မိမိ၏ကြွေးမြီကင်းရှင်းပြည့်စုံခြင်းကို တွေးမိတိုင်း ပီတိသောမနဿဖြစ်ရသော စိတ်ချမ်းသာမှုပင်တည်း။
(၄) အန၀ဇ္ဇသုခ - အပြစ်မရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်သောချမ်းသာ။ မိမိ၌ အပြစ်မရှိသော ကိုယ်၊ နှုတ်၊ စိတ်ထား သုံးပါးပြည့်စုံသည်ကို တွေးမိသောအခါ ဖြစ်သော စိတ်ချမ်းသာမှုတည်း။
အားလုံးသောချမ်းသာများမှာ တရားသဖြင့်ရလာသော ပစ္စည်းများကြောင့် ဖြစ်ရသောချမ်းသာများတည်း။ မတရားစီးပွားရှာသူမှာ မိမိ၏မတရားမှုကို အာရုံပြုမိသောအခါ စိတ်ဆင်းရဲတတ်ရာ အဘယ်မှာ စိတ်ချမ်းသာမှု အပြည့်အစုံရပါအံနည်း။
(သပြေကန်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ပရိတ်ကြီးနိဿယသစ် စာမျက်နှာ ၁၂၂-၁၂၃ မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 5:38 AM0comments Links to this post
Dr. Walpola Sri Rahula Maha Thera
(Translated Into Myanmar Language By U Ko Lay)
(အင်တာနက်စာမျက်နှာတော်တော်များများမှာ ဒီစာအုပ်လေးကို တွေ့ နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဒီစာမျက်နှာမှာ Record တစ်ခုအနေနှင့် ကျန်ခဲ့အောင် ဓမ္မဒါန ထပ်ပြုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား။)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 8:48 AM0comments Links to this post
Labels: Dhamma Ebooks, Dr. Walpola Rahula
There isaTaoist story of an old farmer who had worked his crops for many years. One day his horse ran away. Upon hearing the news, his neighbors came to visit. "Such bad luck," they said sympathetically. "May be," the farmer replied. The next morning the horse returned, bringing with it three other wild horses. "How wonderful," the neighbors exclaimed. "May be," replied the old man. The following day, his son tried to ride one of the untamed horses, was thrown, and broke his leg. The neighbors again came to offer their sympathy on his misfortune. "May be," answered the farmer. The day after, military officials came to the village to draft young men into the army. Seeing that the son's leg was broken, they passed him by. The neighbors congratulated the farmer on how well things had turned out. "May be." said the farmer.
(ဒီပုံပြင်နှင့် ထပ်တူကျတဲ့ ပုံပြင်မျိုး ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပြောလေ့ပြောထရှိကြပါတယ်။ စာဖတ်သူများလည်း သိကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်ခင်ဗျား။)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 5:18 AM0comments Links to this post
How To Practise The Development Of The Sublime States
Sayar U Chit Tin
There are four sterling virtues which are collectively termed in Pali
as Brahma-Vihara: Sublime States, Modes of Sublime Conduct or Divine
Abodes. They are also called the four Boundless States, Illimitable
I)      _Loving-kindness_: Metta, the first Sublime State;
II)     _Compassion_: Karuna, the second virtue that is sublime for man;
III)    _Sympathetic or Appreciative Joy_: Mudita, the third sublime
IV)     _Equanimity_: Upekkha, the fourth sublime virtue, the most
difficult and the most essential.
The development of these Sublime States (Brahmavihara-bhavana) generally
found in the Sutta is as follows: "There, O monks, the monk withamind
full of Loving-kindness pervading first one direction, thenasecond, then
a third one, then the fourth one, just so above, below and all around; and
everywhere identifying himself with all, he is pervading the whole world
with mind full of loving-kindness, with mind wide, developed unbounded,
free from hate and illwill." Hereafter follows the same theme with
Compassion, Sympathetic Joy, and Equanimity.
How To Practise Metta-Bhavana
It is recommended in the Visuddhimagga, the Path of Purification,
that one should go to some quiet place where one could sit in a
comfortable position. Then one should consider the dangers in hate first
and the benefits offered by forbearance. The purpose of this meditation is
to displace hate by forbearance. Then again one cannot avoid dangers one
has not come to see or cultivate benefits one does not yet know.
There are also certain types of individuals towards whom one should
not develop loving-kindness in the first stages. To regardadisliked
person as dear to one is fatiguing, to regardadearly-loved one with
neutrality is difficult, and if the slightest mischance befalls the
friend, one feels like weeping. When an enemy is recalled anger springs
up, and to putaneutral person inarespected one's oradear one's place
is fatiguing. Then if it is directed towards the opposite sex one may
arouse lust. Again one should not develop loving-kindness towardsadead
person for one will neither reach absorption nor access, that is to say,
his loving-kindness will make no headway at all. Now at the start it
should be developed only towards oneself, repeatedly saying: 'May I be
happy and free from suffering'; 'May I keep myself free from enmity,
trouble and live happily.'
Cultivating the thought: 'May I be happy' with oneself as example,
then one begins to be interested in the welfare and happiness of others,
and also to feel in some sense their happiness as if it were one's own:
'Just as I want to live happily and not die, so do others.' So in this way
one should first become familiar with pervading oneself with loving-
kindness to serve as an example. Next, one should choose someone who is
liked, admired and much respected; with the thought: 'May he be happy' and
remembering his virtues.
When in this way one becomes familiar, one can begin to practise
loving-kindness towardsadear one, then towardsaneutral person as very
dear, and then towardsafoe as neutral.
Care should be taken when dealing with an enemy for anger can arise,
and all means must be tried in order to get rid of it. When this is
successful, one will be able to regardafoe without resentment and with
loving-kindness in the very same way as one does the admired person, the
dearly loved one, and the neutral person.
Loving-kindness can now be effectively maintained in being towards
all beings or to certain groups atatime, or in one direction atatime
towards all beings, or to certain groups in succession.
When one can maintain this loving-kindness, made much of it, use it
asavehicle, use it forafoundation, be established in it, keep it
consolidated and properly managed, one can expect 11 blessings: 'A man
sleeps in peace and comfort, he walks in peace and comfort, he dreams no
evil dreams, he is dear to human beings, he is dear to non-human beings,
the gods guard him, no fire or poison or weapon harms him, his mind can be
quickly concentrated, the expression of his face is serene, he dies
without falling into confusion, and even if he fails to penetrate any
further he will pass on to the world of High Divinity, to the Brahma
This is from the Anguttara Nikaya Ekadassa Nipata, Metta Sutta
Karuna Bhavana: Development of Compassion
For the development of compassion one should begin with the task by
reviewing the danger of not having compassion and the advantage of
possessing it. Like Metta (loving-kindness) Karuna (compassion) should not
be directed at first towardsaperson who is neutral, antipathetic or
hostile, towardsamember of the opposite sex or someone who is dead. It
is stated in the Vibhanga, "How does one dwell pervading one direction
with his heart endued with compassion? Just as one would feel compassion
on seeing an unlucky, unfortunate person, so one pervades all beings with
Right at the start, the meditation of compassion should be developed
on seeingawretched person, unlucky, unfortunate, in every wayafit
object for compassion, unsightly, reduced to utter misery, compassion
should be felt for this person in this way: 'This person has indeed been
reduced to misery; if only he could be freed from this suffering.' If one
cannot encounter suchawretched person, then one can arouse compassion
for an evil doer: "Supposeacriminal is under orders of execution by the
ruler, the executors bund him and lead him off to the place of execution,
flogging himahundred times. Then the passers-by give him things to eat
and he goes along eating and enjoying these things, still no one will
think that he is really happy. Everyone will feel compassion for him,
thinking: 'This wretched person is going to die soon; every step leads him
nearer to the presence of death.'" So in this way one should arouse
compassion for an evil doer.
After arousing compassion for an unfortunate, wretched and unlucky
person in that way, one should next arouse compassion foradear one, then
a neutral person and nextahostile person, in the same way. Care should
be taken with regard to an enemy and if resentment arises one must try by
all means to get rid of it in the same way used with loving-kindness.
At one time the Buddha setavery noble example by attending on the
sick Himself and also exhorting His disciples with these words:
The Buddha showed great compassion towards the courtesan Ambapali,
and also towards Angulimala, the murderer, both were converted and
underwentacomplete reformation in character.
Mudita Bhavana: Development Of Sympathetic Or Appreciative Joy
The development of Sympathetic or Appreciative Joy or Gladness should
start with the very dear companion -- one who in the Commentaries is
calleda'boon companion'; for he is always glad; he laughs first and
speaks afterwards. In the Vibhanga it is referred to in this way: 'How
doesameditator dwell pervading one direction with his heart endued with
sympathetic gladness?  Just as one would be glad on seeingavery dear and
beloved person, so one pervades all beings with sypathetic gladness.'
Even if someone who is dear to us is unlucky and unfortunate now
Sympathetic gladness can still be aroused by remembering his happiness of
the past in this way: 'In the past he possessed great wealth andagreat
following and he was always happy.' Again gladness or appreciative joy can
be aroused by apprehending the future glad aspect in the dear person in
this way: 'In the future this dear person will again enjoy similar success
with gold and silver going about in gold palanquins with great followers
After having aroused altruistic joy and gladness with respect to the
dear one one can then direct it successively towardsaneutral one and
then towardsafoe. But if one arouses resentment when dealing withafoe,
one should make it subside in the same way as described under loving-
kindness. Mudita is not mere gladness but sympathetic joy which tends to
destroy jealousy, its direct enemy. It embraces all prosperous persons and
is the congratulary attitude ofaperson, and the tendency is to eliminate
any dislike towards successful persons.
Upekkha: Development Of Equanimity
The development of equanimity is the most difficult and the most
essential of the four sublime states. In the Buddhist Dictionary
Nyanatiloka says, "//equanimity//, also called tatra-majjhattata, is an
ethical quality belonging to the sankhara group (khandha) and should
therefore not be confused with //indifferent feeling// (adukkhamasukha
vedana) which is sometimes also called Upekkha (vedana)." It is one of the
four Sublime Abodes and one of the Factors of Enlightenment. It means
//impartially// or //rightly//, one may discern rightly, viweing justly,
or looking impartially, that is to say, without attachment or aversion,
and without favour or disfavour, in the sense of indifference or neutral
Ven. Narada Thera said, "Equanimity is essential, especially for
laymen who have to live in an ill-balanced world amidst fluctuating
circumstances. Slights and insults are the common lot of mankind. The
world is so constituted that the good and the virtuous are very often
subject to unjust criticism and attack. It is heroic to maintain a
balanced mind in such circumstances.
Loss and gain, fame and infamy, praise and blame, pain and happiness
are eight worldly conditions that affect all humanity."
To develop Equanimity one should look on with equanimity ataperson
who is normally neutral. Then towardsadear one,ahostile person and the
rest. In the Vibhanga this is said: 'How doesameditator dwell pervading
one direction with his heart endued with equanimity? Just as he would feel
equanimity on seeingaperson who was neither beloved nor unloved, so he
pervades all beings with equanimity.'
Through the neutral person one should break down the barriers in each
case between the three individuals, namely: the dear one, the boon
companion, the hostile one, and himself. How to break down the barriers?
Supposeaman is staying together in an abode withadear,aneutral,
andahostile person; and robbers come to him and ask foraperson because
they wish to cut his throat and use the blood as an offering. If he points
to one of the three, he has not broken down the barriers. Or if he offers
himself too he has not broken down the barriers either. Why?
Because he seeks the harm of himself and seeks the welfare of others.
Only when he does not seeasingle person among them to be given and he
directs his mind impartially towards himself and towards others has he
broken down the barriers.
In the development of the four Sublime States, Brahma-vihara Bhavana,
one should practise each of these virtues over and over again so that one
accomplishes mental impartiality towards the four persons, namely,
oneself, the dear person, the neutral one and the hostile person.
The Visuddhimagga says, 'Thus the sign and access are obtained by
this person simultaneously with the breaking down of the barriers. But
when breaking down of the barriers has been effected, he reaches
Metta (Loving-kindness) embraces all sentient beings, Karuna
(Compassion) embraces unfortunate beings, Mudita (Gladness) embraces the
happy and prosperous, and Upekkha (Equanimity) embraces the good and the
bad, the loved and the unloved, the pleasant and the unpleasant.
Posted by The Bliss Of Emancipation at 4:15 AM0comments Links to this post
Labels: Dhamma Articles, Sayar U Chit Tin
Therefore, Ananda, be ye an island unto yourselves,arefuge
unto yourselves, seeking no external refuge; with the
Teaching as your island, the Teaching your refuge, seeking
--- Maha Parinibbana Sutta
Posted by The Bliss Of Emancipation at 4:07 AM0comments Links to this post
To Read The E-Book
Posted by The Bliss Of Emancipation at 10:36 AM0comments Links to this post
Labels: Dhamma Ebooks, Dr. Dhammananda, Dr. Min Tin Mon
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ကလေးများအတွက် ဓမ္မသီချင်းများ
ကျွန်တော် ဒီသီချင်းလေးတွေကို နားထောင်ဖြစ်တော့ မြန်မာပြည်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ညီငယ်၊ ညီမငယ်၊ တူ၊ တူမငယ်များကို သတိရမိပါတယ်။ သူတို့ တွေအတွက်လည်း ဗမာမှုပြုထားတဲ့ ဓမ္မသီချင်းလေးတွေကို တတ်ကျွမ်းတဲ့ အနုပညာရှင်များက စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးကြရင် သိပ်ကောင်းမှာဘဲလို့ တွေးမိပါတယ်။
၁။ Track (1)
၂။ Track (2)
Be kind to all your friends and family
Be kind to cats and butterflies and trees
Don't hurt the fishes swimming in the sea
Here is what Buddha says to me
To love is to care for all lovings around us
To love is to be kind to all beings around us
၃။ Track (3)
If you're angry
You'll make yourself
An urgly little child, urgly little child
၄။ Track (4)
Praise the Lord, Lord Buddha
၅။ Track (5)
It's great to give, it'sablessing to be able to give
It's better for you to give than to always receive
Just like the Buddha, He perfected the act of giving
I wish one day too, I'll be like him
၆။ Track (6)
Gautama Buddha, He's here
၇။ Track (7)
There isagift from Lord Buddha
I like to share with my family
And take it round the world
And share it with all beings
Let the Buddha's wisdom stay on
Let the Buddha's love spread on
Let the Buddha's compassion flow on
Let the Buddha's teaching go on and on
Posted by The Bliss Of Emancipation at 5:31 AM 1 comments Links to this post
Labels: Dhamma For Children, Dhamma Music (Audio)
(ကျွန်တော်အပါအ၀င် တချို့ လူတွေဟာ ဒီ ပါမောက္ခလိုမျိုး တခါတလေမှာ ဖြစ်သွားတာ သတိထားမိပါတယ်။ ခေါင်းထဲမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်အယူအဆတွေနှင့် ပြည့်နှက်နေတတ်လို့တခြားအယူအဆအသစ်တစ်ခုကို ထပ်ထည့်ဖို့ မှာ မလွယ်တော့ဘူးဖြစ်နေရပါတယ်။ စာဖတ်သူတွေကော ဘယ်လိုလဲ...)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 7:05 AM0comments Links to this post
Admonition By First Shwe Kyin Sayardaw
လူကောင်းသည် အရူးနှင့်ပြိုင်၍ အ၀တ်မလစ်ကောင်း။
A good man should not remain naked asamad man does.
သူတော်ကောင်းသည် မသူတော်နှင့်ပြိုင်၍ ဒေါသမဖြစ်ကောင်း။
A gentleman should not show anger asamad man does.
ကျင်ကြီးသည် နွေးသည်ဖြစ်စေ၊ အေးသည်ဖြစ်စေ၊ ရွံဖွယ်သာတည်း။
Stool is loathsome whether it is hot or cold.
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:52 AM0comments Links to this post
Labels: Dhamma Notes, Shwe Kyin Sayardaw
Posted by The Bliss Of Emancipation at 8:53 AM 1 comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 8:21 AM0comments Links to this post
ပါရမီ-ဟူသည် မိမိအကျိုးအတွက် ငဲ့ကွက်လိုလားခြင်းမရှိပဲ အများကောင်းကျိုးအတွက်၎င်း၊ သံသရာမှ လွတ်မြောက်ရေးအတွက်၎င်း၊ ပြုအပ်သော ဒါနစသော ကောင်းမှုများပင်ဖြစ်သည်။ ထိုကောင်းမှုများဖြင့် မြင့်မြတ်သူဟု သိရသည်ဖြစ်ရာ မြင့်မြတ်သူဖြစ်ကြောင်း ဟု အနက်ဖွင့်ဆိုကြ၏။
လူညံ့များမှာ ကောင်းမှုပင်ဖြစ်စေ မိမိအကျိုးရှိမှ ပြုလုပ်လိုကြ၏။ သံသရာမှလွတ်ရေးထက် ဘ၀ကောင်းစားရေး၊ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားရေးကိုသာ အလေးပေးတတ်၏။ ထို့ ကြောင့် ပါရမီမြောက်အလုပ်များမှာ ထိုလူညံ့တို့ အရာမဟုတ် ဖြပ်ရ၏။ ထိုအလုပ်များမှာ ဘ၀အပြစ်မြင်၍ အများအပေါ်မှာ ကရုဏာမေတ္တာအားကြီးသော သူတော်ကောင်း ပုဂ္ဂိုလ်မွန်တို့ ၏ လုပ်ငန်းများဖြစ်ကြ၍ ပါရမီအနက်ကို မြင့်မြတ်သူတို့ ၏ အလုပ် ဟုလည်း ဖွင့်ဆိုကြပြန်သည်။
(သပြေကန်ဆရာတော်ကြီးရေးသားစီရင်အပ်သော “ပရိတ်ကြီးနိဿယသစ် ” စာအုပ်မှ ထုတ်နုတ်ဖော်ပြပါသည်။)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 7:38 AM0comments Links to this post
Dr. Daw Thynn Thynn
Thynn: Yes, initially they are different, but they both arise out of our habit of discrimination, and they both lead to suffering. Whether we love or hate someone is based on our own likes and dislikes. We automatically categorize people according to our own preconceptions. When they meet our ideals and appear to be to our liking, immediately our mind starts to cling to them; and if they should fall into the category of dislike, our minds start to reject them. In this way we end up loving or hating.
Thynn: Let's think aboutasituation where you loveaperson at one time and come to hate him at another. He is the same person, so why do your feelings about him change?
Thynn: True. That means our love changes with each changing situation, and that means our feelings are not permanent, but relative to time and place.
Thynn: Exactly. This is what the Buddha called maya, the illusion of the mind. Our feelings are an illusion born of our conceptual mind; they arise from the ego- self. According to Buddhism, since ego is an illusion, anything that is born of the conceptual mind is also an illusion. It has no substance, permanence or peace. That is why mundane love is fickle. That is why it can change to hate.
Thynn: Let me ask you one thing: before you met this person did you have this feeling of hate in you?
Thynn: And what about now; do you still have it?
Thynn: Then, what is the difference, before and after?
Thynn: Well, you were free of this hate or love before you met him, weren't you?
Thynn: What did you have to do to be free like that?
Thynn: That's right. By ourselves we are free of either loving or hating. Only when we start to like or dislike do we become entangled in our own emotions. As soon as we come to realize that they are illusions of our own making, we become free. We are brought back to our original situation where there is neither love nor hate. Only when the mind starts to work on liking and disliking is the burden of love and hate built up and we lose that freedom temporarily.
(This dhamma article was reproduced from the book of "Living Meditation, Living Insight" By Dr. Daw Thynn Thynn.)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 3:52 AM0comments Links to this post
Labels: Dhamma Articles, Dr. Daw Thynn Thynn
(ပုံပြင်တွေရဲ့ အပေါ်မှာ စာဖတ်သူရဲ့ ထင်မြင်ချက် အယူအဆလေးတွေကို ဖြစ်နိုင်ရင် ဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါတယ်။)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:44 AM0comments Links to this post
မွေးနေ့ ရှိက၊ မှန်မုချလျှင်၊ သေရမည့်နေ့ ၊ ဧကန်တွေ့ လိမ့်
ဘယ်နေ့ ဘယ်ခါ၊ မသိပါသည်၊ စောင့်ခါနေရ၊ လူ့ ဘ၀။
မော်ခါကြွားခါ၊ မာန်တက်ခါဖြင့်၊ ပျော်ခါပါးခါ၊ ဇိမ်ယူခါဖြင့်
တရားမသိ၊ လောဘဖိလျက်၊ မှိုင်းမိကိလေ၊ ပျော်ပျော်နေက
သေသည့်အခါ၊ ငရဲရွာတွင်၊ ခံရမည်မှာ၊ မုချသာတည်း။ ။
(ဤဆုံးမလင်္ကာကို ရေးစပ်သူမှာ သတ္တမမြောက် ကျော်အောင်စံထား ဆရာတော်ဟု ထင်ပါသည်။ ရေးသားသူအမှန်ကို သိရှိသူများ ရှိပါက မေတ္တာရှေ့ ထား ပြင်ပေးကြပါ ခင်ဗျား။ )
Labels: Dhamma Notes, Dhamma Poems